China SUS304 umxube 24 intloko multihead umlinganisi mveliso kunye nabenzi | Isisindo esifanelekileyo
Ubunzima bentloko obungama-24 bunokuba nobunzima kwaye buxube iintlobo ezi-2-8 zeemveliso ngaxeshanye, zihlala ziibhontshisi, iinkozo, amandongomane, iziqhamo ezomileyo, ukutya kwaselwandle owomileyo kunye nezinye iiprojekthi zokuxuba.
Umthamo weH Hopper: 0.8L / 1L
Umxube: Iintlobo ezi-4-6
I-SW-M324 umlinganisi weentloko ezininzi unee-3 ze-hopper: feed hopper, weight hopper kunye nememori hopper. I-Smart Weigh ine-innovative ye-3 layers hopper 24 head weigher: i-Hop Hop kunye ne-memory hopper ziya kusebenza kunye ukudityaniswa kobunzima.
I-1-300 x4 gr
Iingxowa ezingama-50 / imizuzu
10 ”iscreen sokuchukumisa
Umxube weentloko ezininzi esindlekayo ulungele iintlobo ezahlukeneyo zeemveliso, unokufikelela kwisisindo kwaye uxutywe ngaxeshanye. Gcina indawo kwaye wehlise iindleko zokugcina umatshini.
• Ukuxuba iintlobo ezi-2-6 zeemveliso ekukhetheni, kunye nememori hopper ngesantya esiphezulu kunye nokuchaneka;
• iimodeli ezi-3 ezinesisindo ezikhoyo: umxube, amawele kunye npakethe enye;
• Setha umsebenzi wokulahla endaweni yokumisa;
Iindawo zokunxibelelana ngokutya zihlukaniswa ngaphandle kwezixhobo, kulula ukucoca.
I-Smart Weigh ibonelela ngombono owahlukileyo we-3D (umbono we-4 ngezantsi). Lo ngumxube ama-3 weentloko ezingama-24 ubunzima bunzima.
4. Ukuba ndithenga umlinganisi weemveliso ezixutyiweyo, ndingalinganisa imveliso e-1 kwixesha elizayo?
Ewe. Ukuba ngumxube we-4 umlinganisi, xa ufuna ukulinganisa iimveliso ezingama-200g, umlinganisi ngamnye omisela ubunzima ekujoliswe kuye ngu-50g. Ubunzima bokugqibela ziigram ezingama-200.
Edlulileyo: I-SUS304 isantya esiphakamileyo se-14 entloko yeemitha ezininzi
Okulandelayo: I-SUS304 Imigangatho eli-10 yeentloko ezininzi ezisindayo
Inkqubo yokulawula imodyuli ithetha inkqubo yokulawula ibhodi. Ibhodi yomama ibala njengengqondo, ukuqhuba ibhodi yokulawula umatshini osebenzayo. Isisindo seSmart Weight sisebenzisa i-3nd module system yokulawula. Ulawulo lwebhodi eqhuba e-1 yokuhambisa ukutya kunye ne-1 yokulinganisa hopper. Ukuba kukho i-hopper eyi-1 ephukileyo, thintela le hopper kwiscreen sokuchukumisa. Enye i-hopper inokusebenza njengesiqhelo.
Kwaye ibhodi yokuqhuba ixhaphakile kuthotho lweSmart Weigh multihead weigher. Umzekelo, hayi. Ibhodi yokuqhuba eyi-2 ingasetyenziselwa hayi. Iibhodi ezi-5 zokuqhuba. Ilungele isitokhwe kunye nokugcinwa.
Umxube weentloko ezininzi